Intle iGalili Getaway - I-Airbnb
Intle iGalili Getaway
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguEmma
Indlu enomtsalane kunye neyabucala ekwindawo yomnquma yelali entle yaseKlil kwiNtshona yeGalili. Indlu enobuhlobo ne-eco-friendly inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, isitovu seenkuni, i-air conditioning, amagumbi amabini okulala, ibhedi yomntwana, i-veranda enkulu, igadi egcinwe kakuhle kunye nembono evulekileyo ethandekayo.
Ukuba uhamba nabahlobo unokufuna ukujonga indawo yethu ekufutshane "yeKhabhinethi yeNdalo eKlil"
Indlu kunye nezitiya zihlaziyiwe kwaye zagcinwa kakuhle, nto leyo eyenza ukuba ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka eGalili. Kukho amagumbi amabini okulala aneebhedi ezimbini kunye nebhedi enye yomntwana, kunye neveranda enkulu engaphandle. Indlu imi phakathi kwemithi yomnquma kwaye izolile kwaye ibucala kakhulu.
4.95 out of 5 stars from 289 reviews
4.95 · Izimvo eziyi-289
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi289
IKlil yidolophana entle enendalo ekwiNtshona yeGalili. Kukho igadi ephilayo kunye neenketho ezininzi zokutyela eKlil kunye neesayithi ezininzi zasekhaya onokuthi uzibone, kubandakanya iinqaba ze-crusader, iRosh HaNikra, kunye ne-Achziv Beach.
Umbuki zindwendwe ngu- Emma
Siyavuya kakhulu ukuphendula imibuzo kunye nokubonelela ngeengcebiso nge-imeyile, umnxeba okanye umyalezo obhaliweyo ngaphambi nangexesha lokuhlala kwakho.
Iilwimi: 中文 (简体), English, עברית